Sidee si ay u gudbiyaan Lugood Library in Computer New
> Resource > Lugood > Bedelka Lugood Library in Computer New
"Waxaan iibsaday laptop cusub. I yaabban ahay sida loo ka PC jir wareejiyo Lugood Library in laptop cusub. Waxaan haystaa boqollaal songs, daraasiin playlists, iyo qaar ka mid ah Movies Anigu ma aan daawaday Library Lugood ee kasta. fikradda "? - Jenny
Waa madax u ah dadka doonaya in ay u gudbiyaan Lugood Library in computer cusub, maxaa yeelay, Apple oo kaliya ogolaanaysaa users hesho waxa ay soo iibsatay ka Lugood Store in computer cusub. Sida music iyo videos ilaha kale, dadka isticmaala ay iyaga weligood lumin. Nasiib wanaag, qaar ka mid ah siyaabaha jira hagaajin karaa dhibaatada. In socda, waxaana dooneynaa in ay ka hadlaan sida ay u gudbiyaan Lugood Library in computer cusub halka yareeyo halista ah ee laga badiyay files, gaar ahaan heesaha iyo videos iibsaday ilo kale ma Lugood Store.
Music Transfer, Songs, iyo Photos ka Lugood Library in Computer New
Haddii aad tahay qof user Lugood ah, dhab ahaan, waxaad leedahay qalab Apple ah, iPhone, iPad, iPod ama, sax? Ka hor inta Lugood in computer cusub wareejiyo, waa in aad u hagaagsan aad Lugood Library la qalab Apple. Fadlan hubi aad wareejin oo dhan loo baahan yahay music, videos, xitaa playlists in aad qalab Apple ka dibna raac tallaabooyinka hoose si aad u barato sida loo dhaqaaqo Lugood Library in computer cusub.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi TunesGo
Click Download si aad u hesho rakibo xirmo TunesGo. Ku rakib app this on your computer. Labada TunesGo (Windows) iyo TunesGo (Mac) ayaa laga heli karaa. Hel version saxda ah ee computer. In socda, waxaan ka hadli doonaa sida loo isticmaalo TunesGo (Windows) si ay u gudbiyaan music, heeso, playlists, iyo sawiro in computer cusub.
Isticmaal cable USB qalab Apple yimaado iyada oo in lagu xiro qalab la your computer iyo abuurtaan TunesGo. Tan iyo markii aad wax walba synced ka Lugood Library in qalabka, ka dib markii TunesGo ogaado qalabka, waxaa muujin doonaa music, videos, iyo sawiro, iwm uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 3. Transfer Lugood Library in computer cusub
Hadda waxaad dooran kartaa heeso loo baahan yahay, videos, playlists, iyo sawiro uu furmo suuqa ugu weyn oo guji "Dhoofinta in ay" si ay u dhoofiyaan si aad Lugood Library cusub ama disk adag deegaanka ee computer cusub.
Fiiro gaar ah: TunesGo ah (Windows) Hadda kaliya taageeraa playlists in computer cusub wareejinta.
Bedelka Iibsasho Lugood Store in Lugood Library in Computer cusub
Qaar ka mid ah Lugood Store iibsaday alaabta, sida laga daadiyo, inaad si fudud aad ku wareejin karaa Lugood Library in computer cusub. Ogolaato your computer cusub> Connect qalab Apple la computer> midig u guji qalab Apple hoos Device in Lugood uu furmo suuqa ugu weyn> Dooro "Iibsasho Transfer".